को हुन संगीतकार अर्जुन पोखरेल | Butwal Dainik
आज: २०७८ कार्तिक ३, बुधबार
सनराईज युवा क्लबको सातौं वार्षिकोत्सबका कार्यक्रम आजदेखी सुरु हुदै
मोरङमा भेटिए अनाैठाे टाउकाे भएकाे बालक
रहेनन् रारा चाउचाउ जन्माउने फणिन्द्रमान, लाहुरे थिए तर उद्योगमा लागे
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य पछि टिकाटिप्पणी सुरु
दशैँको बेलामा दशा लाग्यो , २३ जनाको मृत्यु बस क्षतविक्षप्त अवस्थामा
मुगु बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २४ पुग्यो (अपडेट)
देशकै नमुना जिल्ला जहाँ एमालेको बीऊ नै रहेन , सबै एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश !
दशैमा घर फर्किदै गरेको बस दुर्घटना: २२ जनाको मृत्यु
पूर्वराजाले शुभकामना दिँदै भने, ‘राजनीति गुटमा अल्झियो अहिले सम्म जनताले के पाए’ ?
यिनै हुन् घान्द्रुक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरु
फेरी बाघले खायो अर्को ९ वर्षीया बालिका
१२ वर्षसम्म साउदिमा कमाएर घर फर्कदा न पैसा छ न श्रीमती
दुलही लिन हिडेको जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु १४ जना घाइते
रुपन्देही घटनाः सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम प्रहार, ४९ सुरक्षाकर्मी घाइते
देशलाई रिणमा धकेलेर साँसदलाई दशैभत्ता बाड्न सकिदैन : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा
को हुन संगीतकार अर्जुन पोखरेल
२०७७ बैशाख २६, शुक्रबार (१ साल अघि)
८४८ पटक पढिएको
अर्जुन पोखरेल नेपाली संगीतको जिवित अजर नाम हो । चितवनमा जन्मिएका अर्जुन एउटै गीतबाट १५ वटा अवार्ड जित्ने संगीकार हुन् । सानै देखि गाउने उनी बाल्यकालमा उनी बुवा र आमासँगै भजन र बालन गाउँथे ।
सानोमा उनी दोहोरी भनेपछि हुरुक्कै हुने उनले विसं. २०६१ सालमा रेकर्ड गरेको पहिलो गीत पनि लोक गीत नै थियो । उनले पहिलो गीतबाटै कालिका अवार्ड प्राप्त गरेका थिए ।
ललितकला र इलाहाबादबाट संगीतको औपचारिक शिक्षा लिएका उनले पछि आँफैले पनि थुप्रै इन्ट्च्यिुटमा संगीत अध्यापन गराए ।
एल्बमका गीतको प्रोमोशन गर्न गाह्रो हुने बुझेका उनी चलचित्रका गीतमा संगीत गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । त्यसैले उनले त्यो बेला थुप्रै चलचित्रका निर्देशक तथा निर्मातालाई आफूले तयार पारेको संगीत सुनिदन आग्रह गरे । कतिले सुने तर लिएनन् ।
उनले राजु गिरीको चलचित्र दिलमायाँमा पहिलोपटक चलचित्रका लागि गीत गाए । त्यही चलचित्रको गीतबाट उनी क्लिक भए । राजु गिरीकै बिन्दास चलचित्रमा उनले बाटो मोडेर गयौ… बोलको गीत तयार पारे । यो गीतले अर्जुनलाई सुपरहिट बनायो ।
त्यसयता उनले फर्किएर हेर्नु परेन । चलचित्रमा उनलाई संगीत गराउन निर्देशक निर्माता क्यूमा बस्छन् । म त अलपत्रै पर्छु तिमी भएको न बेला,रहर छ सँगै जस्ता दर्जनौ गीत सुपरहीट छन ।
एउटा समय थियो । मान्छेहरु भन्थे, चलचित्रका गीत बर्खाको भेल हुन् । अर्थात कालजयी हुँदैनन् । त्यस्तै पनि थियो । तर, अर्जुन पोखरेलले चलचित्रका गीत गाउन थाले । त्यस यता आधुनिक गीत भन्दा चलचित्रका गीत कालजयी हुने मेलोडीमा तयार हुन थालेका छन् । उनले हाल सम्म दर्जनौ मुजिक अवार्ड तथा सिने अवार्ड हात पारीकेका छन ।
पुजा जी सबै पत्रकारको दानापानी हजुरकै कारण चलिरहोस् ।’
‘भिटेन’ अब नायक बन्दै, लिए १८ लाख पारिश्रमिक
‘मेरो भाग्यमा कुनै पुरुषको प्रेम छैन’ : मनिषा कोइराला
अभिनेत्री ऋचा शर्मा बनिन् आमा, बच्चा जन्मिनु अघि आइदियो यस्तो समस्या
निशा घिमिरेले संसार छोडेसगै उनको यो बेहुलिको भिडियो भाइरल ,अस्तायो यो अनुहार
आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्न श्रीमान शारीरिक रूपमा कमजोर भएपछी
बुटवल उपमहानगरले पायो उत्कृष्ट अवार्ड